Thursday, 07 February 2019 15:15
ရေတိုင်ကီအဖုံး (Pressure Cap) နှင့် ပတ်သက်၍ သိသင့်သည့်အချက်များ
ရေတိုင်ကီများ၏ ရေဖြည့်ပေါက်တွင် pressure cap ခေါ် အအေးခံစနစ်၏ ဖိအားကို တိုးမြှင့်ပေးရန် အဖုံးတစ်ခုတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Radiator cap လို့လည်းခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။
Wednesday, 06 February 2019 16:12
ရေထိုးသွင်းခြင်း (water injection) ကနေ အင်ဂျင်ပါဝါမြင့်လာမယ်ဆိုတာ…….
တာဘိုအင်ဂျင်ကို ဘယ်လိုမျိုးထပ်လုပ်လိုက်ရင် အင်ဂျင်ပါဝါထပ်တိုးလာမယ်ဆိုတာ ရေရေရာရာသိတဲ့သူတွေ တောင်မှ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ဖြစ်သွားစေမှာအမှန်ပါ။
Friday, 14 September 2018 17:03
Toyota Wish မှာ ဖြစ်တတ်သော ပြသာနာများ
Toyota Wish ဟာ လူသုံးများတဲ့ ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်မှာလည်း အရောင်းရဆုံး ကားအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Toyota Wish အသုံးပြုတဲ့ ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေ အနေနဲ့ အဲသည်ကားမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ပြသာနာလေးတွေကို ကြိုတင်သိရှိထားရင် အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
Friday, 14 September 2018 15:46
Wednesday, 12 September 2018 17:08
Tuesday, 04 September 2018 16:00
Toyota Raum တွင် ဖြစ်တတ်သော ပြဿနာများ
ဂျပန်အခြေစိုက် တိုယိုတာကားကုမ္ပဏီက ထုတ်လုပ်တဲ့ Toyota Raum ကားအမျိုးအစားကတော့ အင်ဂျင် ပါဝါ 1500 CC ကို2နဲ့4wheel ဆိုပြီး နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ၀န်းကျင် တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
ကားအင်ဂျင်တစ်လုံး ပုံမှန်လည်ပတ်နေရန် စနစ်ပေါင်းများစွာနှင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
K.T.W. Logistic & Transportation Services
(Machinery & Spare Parts)